Sidee loo helaa cilmi baaris Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Nagu saabsan Sida Loo Helo Daraasadda
At The Reward Foundation waxaan dooneynaa inaan bixino caddaynta cilmiga ugu dambeysa ee ugu muhiimsan si aan u taageerno akhristeyaasheena si loo fahmo jacayl, jinsi, porno iyo maskaxda. Qeybaha Waxyaabaha Khayraadka ah waxaan bixinnaa qoraalada daraasaadka sayniska ah ee aan akhrinay.
Sideen u akhriyi karaa waraaqaha cilmi-baarista asalka ah?
Qaar ka mid ah waraaqaha sayniska ayaa la heli karaa iyada oo loo marayo marin furan oo lacag la'aan ah Hase yeeshee intooda badani waxay ku muuqdaan joornaalada ay daabacaan shirkadaha ganacsiga. Helitaanka waxaa xadiday Xuquuqda daabacaadda. Tan macnaheedu waa inaad bixiso lacag si aad u hesho iyaga. Dad aad u yar ayaa awoodi kara inay sidaan sameeyaan. Inta badan joornaalada ayaa hadda lagu daabacaa elektaroonikada waxayna heli karaan labada faylasha PDF si ay u soo dejiyaan iyo sida faylasha HTML si ay u akhristaan ​​internetka. Alaabooyinka intooda badani waxay ku yaallaan saldhigga lacag bixinta.
Maktabado badan oo waaweyn ayaa waxay ubaahan yihiin joornaalada internetka, sida qaybo ka mid ah Adeegyada Caafimaadka Qaranka. Heshiisyada sharciga ah micnahoodu waa inay bixin karaan oo keliya inay helaan ardayda iyo shaqaalahooda diiwaangashan. Xubnaha dadweynaha ee ku yaal Boqortooyada Ingiriiska waxay si tartiib tartiib ah u helayaan maaddooyinka lagu daabacay UK iyagoo u maraya Maktabadda Ingiriiska, Maktabadda Qaranka ee Scotland iyo Maktabadda Qaranka ee Wales. Maktabadaha buuggan waxaa la heli karaa oo kaliya in ay tagaan martida. Mar walba hubi inaad horay u sii wadatid si aad u aragto haddii aad awood u leedahay inaad horay uhesho intaadan safrin.
Meel fiican oo bilaw ah waa had iyo jeer Isku baadho Maktabadda Britishka.
Dadka ku nool Scotland way isku dayi karaan Maktabadda Qaranka ee Scotland. Haddii aad ku jirto Wales, waa Maktabadda Qaranka ee Wales waa inay noqotaa joogsigaaga koowaad.
Doorka The Foundation Foundation
On this website waxaan isku dayi doonaa in ay bixiyaan helitaanka ugu yaraan abstract ama kooban ee waraaq kasta oo aan sheegno. Waxa kale oo aanu siin doonaa isku-xidhka ku-xigeenka ama fursadaha ikhtiyaariga ah ee aad u leedahay inaad akhriso. Qorshuhu waa inuu soo saaro macluumaadka muhiimka ah isla markaana la xidhiidha habka loo heli karo dadka intooda badan.